covid(covid) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । उत्तर कोरियामा ४ दिनमा ८ लाखभन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। गत बिहीबार कोरोना संक्रमणको पहिलो केस देखिएको थियो। त्यसयता उत्तर कोरियामा कोरोनाका कारण ४२ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ। रिपोर्टका अनुसार ४ दिनमा उत्तर कोरियामा ८ लाख २० हजार ६२० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। विगत दुई वर्षदेखि...
कोरोनाले चिनियाँ श्रम बजार अतिप्रभावित, बेरोजगारी दर दुई वर्षयताकै उच्च
काठमाण्डौ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली केकियाङले चिनियाँ श्रम बजारको अवस्था नाजुक रहेको बताएका छन्। चीनको कम्युनिष्ट पार्टीमा दोस्रो वरियताका नेता केकियाङले कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित बन्दा देशको श्रमबजारको अवस्था नाजुक भएको बताएका हुन्। श्रमबजारमा रहेको समस्या समाधान गर्न केकियाङले सबै...
चिनियाँ जनतामा कोरोनाभन्दा यो कुराको ठूलो डर, सांघाईको हालतले बेइजिङमा बढ्यो त्रास
काठमाण्डौ । चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्रगतिमा फैलिरहेको छ। यस परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिले कोरोनाबाट प्रभावित चीनले यो महामारीबाट सबैभन्दा पछि राहात पाउने देखिन्छ। कोरोना न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रपति सी जिनपिङले शून्य कोभिड नीति लागू गरेका छन्। यो नीति कोरोना संक्रमणको मामिला घटाउनका लागि लिइएको थियो। तर, अहिले यो नीति...
चीनका कारण फेरि संकटमा विश्व !
काठमाण्डौ । निकै कडा लकडाउनका कारण अप्रिलमा चीनमा आर्थिक संकट बढ्न थालेको छ। लकडाउनका कारण सांघाईलगायत धेरै सहरका कारखानामा उत्पादनसँगै माग पनि घटेको छ। अब चीनका यी प्रतिबन्धको प्रभावले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुने डर सिर्जना भएको छ। जसका कारण मन्दीको दायरा बढेर विश्वभर पुग्न सक्छ। कोरोनाका कारण चीनमा लगाइएको कडा...
चीनमा कोरोनाको कहर : सार्वजनिक स्थानमा जान नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य
काठमाण्डौ । चीनमा कोरोना संक्रमणको मामिला लगातार बढिरहेको छ। बेइजिङमा बसोबास गर्ने मानिसका लागि कडा नियमहरु लागू गरिएको छ। यो नयाँ नियमअनुसार बेइजिङमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्नुअघि कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनुपर्नेछ। यी नियमहरु कहिलेसम्म लागू हुने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट नभए पनि बेइजिङमा...
चीनको सांघाईमा लकडाउनपछि कोरोनाबाट पहिलोपटक तीनको मृत्यु
काठमाण्डौ । चीनको आर्थिक केन्द्र मानिने सांघाईमा लकडाउनपछि कोरोना संक्रमणबाट पहिलोपटक तीनजनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मृत्यु भएका ८९ देखि ९१ वर्षका तीन वृद्धको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जनाइएको छ। आयोगका अनुसार ती तीनैजनाले कोभिडविरुद्ध खोप लगाएका थिएनन्। सांघाईमा यसअघि कोभिडका कारण...
कोरोनाले सांघाई त्राहिमाम : क्वारेन्टिन सेन्टरहरु खचाखच, मानिसहरु भोकभोकै बस्न बाध्य
काठमाण्डौ। चीनको आर्थिक केन्द्र सांघाईमा कोरोनाले निकै त्रास फैलाइरहेको छ। सांघाईमा बिहीबार २७ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। तर, २५ हजारभन्दा बढी संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन। राष्ट्रपति सी जिनपिङले कडाइ गर्ने भनेकै भोलिपल्टै सांघाईमा यति धेरै मामिला बाहिर आएका हुन्। कोरोनाबाट सांघाई अहिलेसम्मकै बढी...
चीनमा फेरि तीव्रगतिमा फैलिँदै कोरोना संक्रमण, एकैदिन १६ हजार बढीमा पुष्टि
काठमाण्डौ । चीनमा फेरि एकपटक कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्रगतिमा बढिरहेको छ। चीनमा सोमबार १६ हजार ५९० नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। जसमध्ये १ हजार २३५ जनामा संक्रमणको लक्षण देखिएको छ। तर, १५ हजार ३५५ संक्रमितमा कुनै लक्षण देखिएको छैन। चीनको व्यापारिक सहर सांघाईमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। चीन सरकारले विच्याटको आधिकारिक...
चीनमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, सांघाईमा लकडाउन घोषणा
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। नयाँ संक्रमित पुष्टि हुने संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यसैबीच संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि चीनको सबैभन्दा ठूलो सहर सांघाईमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। दुई वर्षभन्दा अगाडि कोरोना महामारीयता घोषणा गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो लकडाउन हो। नौ दिनको समयावधिमा दुई चरणमा लकडाउन गरिनेछ।...
चीनमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य परीक्षण तीव्र पारिँदै
काठमाण्डौ । चीनमा पछिल्ला केही दिनयता कोरोनाबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ। चिनिया स्वास्थ्य अधिकारीहरुले पछिल्ला केही सातादेखि संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको बताएका छन्। चीनको नेसनल हेल्थ कमिसनका अनुसार चीनका विभिन्न सहरमा बुधबारमात्र ४०२ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत मंगलबार पनि २३३ जनामा संक्रमण पुष्टि...
ओमिक्रोनको महालहरबीच आयो गुड न्युज, कोरोना महामारी ‘अन्त्य नजिक’ !
काठमाण्डौ । विश्वमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको महालहरबीच वैज्ञानिकहरुले एउटा सुखद् खबर दिएका छन्। ओमिक्रोन तीव्रगतिमा फैलिरहे पनि गम्भीर बिरामी र अस्पताल भर्ना दर खासै बढेको छैन। केही वैज्ञानिकहरुले यो तथ्यले महामारीको नयाँ र कम चिन्ताजनक च्याप्टर सुरु भएको संकेत गरेको बताउँछन्। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको इ�...
ओमिक्रोनको त्रास: विश्वभर दैनिक हजारौँ उडान रद्द, लाखौँ यात्रु प्रभावित
काठमाण्डौ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्रगति फैलिन थालेपछि विश्वभर फेरि त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। ओमिक्रोन संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका विभिन्न देशहरुले प्रतिबन्धात्मक नियमहरु लागू गर्न थालेको छ। कतिपय देशहरुले विभिन्न देशबाट हुने यात्रालाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन्। नयाँ भेरिएन्टकै कारण विश्वभर दैनिकजसो हवाई...
ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यु
काठमाण्डौ । कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुने संख्या बढ्दै गएपछि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आज सोमबारबाट पुनः रात्रिकालीन कर्फ्यु लगाइने भएको छ। दिल्ली राज्य सरकारले पुनः रात्रिकालीन कर्फ्यु लगाउने निर्णय गरेको हो। नयाँदिल्लीमा राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यु लगाइनेछ। पछिल्लो २४ घन्टामा दिल्लीमा थप...